Madaxweyne Xasan: Laamaha amaanka waxaan ka sugeynaa baaritaan natiijo leh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxeweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dilkii maanta magaaladda Muqdisho loogu geystay xildhibaan Maxamed Maxamuud (Xayd) ayaa hay’adaha amaanka faray iney sameeyaan baaritaan ku aadan dilka xildhibaankaas.
“Hey’adaha Ammaanka ee ay shaqadoodu tahay inay ka hortagaan falkaan oo ay kooxaha nabad diidku sameyeen nooca ay doonaanba ha ahaadeene waa inay sababtu soo cadeeyaan. Hey’adaha amniga waa inay sameyaan baaritaan natiijadiisu aan ka sugi doono. Shacabka Soomaaliyeed uma dulqaadan karo sii socoshada dilalka qorsheysan ee kooxaha naf lacaariga ah sameynayaan” ayuu yir madaxweyne Xasan Sheekh.
Weeraro hore oo Alshabaab ka geysteen Muqdisho ayaa sidaan oo kale madaxda dowladda amar ugu bixiyeen iney sameeyaan baaritaan, hase ahaataa baaritaanadaas inta badan sooma saaraan natiijo.
Nicholas Kay: Waan ka naxay geerida xildhibaan Xeyd